BOOTMGR Na-adịghị - Olee otú idozi ya effortlessly
> Resource> Utility> 2 Ụzọ Idozi "BOOTMGR Na-adịghị" Nsogbu
Ọ bụ n'ezie manụ izute "BOOTMGR na-efu". Ị nwere ike iji kọmputa gị ejikari ruo mgbe ọ na-ofu. Ma atụla nchegbu. Ọ bụrụ na a nwere ihe ọ bụla na-eme na gị ngwaike, e nwere 2 ngwọta maka ị idozi "BOOTMGR na-efu" nke na Windows 7, Vista, XP, wdg
Way 1. Idozi BOOTMGR efu na a bootable CD
Nke mbụ niile, ịkwesịrị ịmepụta a bootable CD ma ọ bụ USB, nke na-arụ ọrụ ahụ dị ka Windows DVD ma na-efu gị na-erughị. Wondershare LiveBoot buut CD / USB pụrụ ịbụ mma nhọrọ. Ọ nwere ike na buut gị na kọmputa na ịrụzi nile di iche iche nke Windows nsogbu, dị ka-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo, buut okuku, loading okuku, na ndị ọzọ. Ị nwere ike nweta ya site na ịpị njikọ n'okpuru.
Mụta ihe banyere Wondershare Liveboot
Mgbe ịzụta usoro ihe omume, ị ga-enweta ozi na download njikọ na ndebanye aha na koodu. Chọta a na kọmputa dị mma iji wụnye omume na registrate ya. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru na-eme ihe dị gị mkpa.
Nzọụkwụ 1. Mepụta a bootable USB mbanye / CD na Liveboot
Wụnye na-agba ọsọ ahụ omume na a na-arụ ọrụ na kọmputa. Kwadebe a ide USB mbanye ma ọ bụ CD na fanye na kọmputa ebe ị na-na na arụnyere na LiveBoot. Mgbe ahụ, otu-pịa ka ọkụ a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na interface dị ka ndị na.
Nzọụkwụ 2. buut na kọmputa na LiveBoot
Fanye LiveBoot CD gị na kọmputa na-CD-ROM ma ọ bụ nkwụnye ahụ USB mbanye, na-amalite ya. Mgbe Windows ibu, pịa F12 ozugbo na-esi n'ime Ngwaọrụ buut NchNhr. Họrọ nhọrọ nke USB CD-ROM mbanye. Mgbe a sekọnd ole na ole, ị ga-enweta a windows igbu, wee họrọ "buut si LiveBoot".
Nzọụkwụ 3. Malite ịrụzi njehie nke "BOOTMGR na-efu"
Mgbe na n'ime Windows, ẹkedori LiveBoot. Na-aga "Windows Iweghachite" na-ahọrọ "buut Crash Ngwọta" taabụ. Ebe i nwere ike na-ele nziputa nke kọmputa gị mgbe Bootmgr na-efu, na-akpata nsogbu a na-agbanwe agbanwe. Dị ka e nwere ike ịbụ dị iche iche mere Bootmgr na-efu, e nwere 4 ụzọ nyere. I nwere ike ịgbalị ha otu otu ruo na kọmputa gị na-arụ ọrụ nke ọma. Ị naanị mkpa soro ntuziaka na interface n'ihu.
Method 1. Run a buut File Iweghachite idozi nsogbu a.
Method 2. Run "Disk ego" idozi ihe ọjọọ sectors na-emetụta loading nke usoro faịlụ. Reboot si diski ike gị.
Method 3. Gbaa bootsect iwu na iwu ozugbo idozi buut okuku mere site buut oru njehie. Reboot si diski ike gị.
Method 4. Nke a bụ nke ikpeazụ ngwọta ma ọ bụrụ na niile n'elu anaghị arụ ọrụ. Run Windows Key Finder na Office Key Finder iji naputa gị Windows na Office isi, na mgbe ahụ reinstall gị Windows na Office. Ọ na-pụrụ inyere gị aka ndabere gị niile data na mbụ ebe a.
Way 2. Idozi BOOTMGR efu na a Windows DVD
Ọ bụrụ na ị nwere a Windows echichi disk, ị nwere ike ozugbo iji ya idozi Bootmgr efu nke. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu onye, ​​mbụ ụzọ na-atụ aro, n'ihi na ọ nwere ike ịzọpụta gị ukwuu na ịzụta a Windows echichi DVD.
Ọzọ, ka ego otú ndozi Bootmgr efu nsogbu na a Windows DVD na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Fanye Windows DVD gị na kọmputa DVD ọkpụkpọ na Malitegharịa ekwentị ya;
Nzọụkwụ 2. Nịm Language, Time na Keyboard na Interface;
Nzọụkwụ 3. Pịa "Rụzie kọmputa gị";
Nzọụkwụ 4. Windows ga ahụ na-agbalị ịchọta echichi ndekọ maka Windows 7, Vista, ma ọ bụ XP. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu na kọmputa gị, họrọ onye ị chọrọ ịrụzi;
Nzọụkwụ 5. Pịa "Mmalite rụkwaa";
Nzọụkwụ 6. Ị na-ahụ ozi na "mmalite rụkwaa na-achọpụta na gị usoro maka nsogbu ...";
Nzọụkwụ 7. Mgbe ọ mere, ọ ga-akpali gị Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa.
Ugbu a, ị nwere ike wepu DVD na reboot kọmputa gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Dwwin.exe - wdg Initialization Okpu? Ihe i kwesịrị ime?